तपाईं एक ज्याकेट किनेको, र केही समयको लागि उनको गिल्ला भने, हामी आफ्नो लुगा सेतो छर्रहरुमा छ मा, त्यसपछि fluff को जैकेट तल चढती देखे। त्यस्ता समस्याहरूको कुनै कुरा यो कति लागत, सिद्ध छैनन् र यसलाई किनेको कहाँ: बजार वा महंगा बुटीक मा। समस्या निर्माता सिर्फ एक गुण लाइनर पैसा बचत र राख्न एक धेरै नै सरल र धेरै पातलो निर्णय गरेको छ भन्ने छ। एक समय fluff prolazili गर्न सुरु गरेपछि त वा, एक विशेष झोला हेम। यो धुने पछि विशेष गरी सजिलै देखिने छ। के गर्न तल जैकेट को fluff चढती भने? यो स्थितिमा के गर्ने?
तिनीहरूले मात्र हल्का, तर पनि धेरै न्यानो छैन किनभने धेरै मान्छे, जैकेट तल लगाउने रुचि हो, र आफ्नो लागि एउटा भारी कोट लगाउन आवश्यक छैन। तर फिलर समस्या धेरै अक्सर हुन्छ, र यो पनि कम्पनी भण्डारमा, तपाईं नाजुक अस्तर एक ज्याकेट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ किनभने विरुद्ध, बीमा गर्न सकिन्छ। यो त तल जैकेट तल चढ्नु भनेर भयो भने, "म के गर्नुपर्छ?" - एक सामयिक मुद्दा। जैकेट कसरी सुरक्षित गर्न? त्यहाँ उत्पादन पुनर्जीवित गर्न मदत गर्न सक्छ, तर समय, धैर्यता र गर्न केही काम खर्च हुनेछ धेरै विधिहरू छन्।
अनुचित लुगा धुने
पंख बाहिर चढ्नु भने, यो धेरै राम्रो हेर्न छैन, तर तिनीहरूले भित्र चढती भने - यो अप्रिय र असहज छ। र यस्तो उत्पादन बस असम्भव छ लगाउने। पनि fluff कारण तपाईं गलत कुरा धोए थियो भन्ने तथ्यलाई चढ्नुहोस् सक्छ। यो कुरा soaking एक नाजुक चक्र मा गर्नुपर्छ।
fluff छैन बन्द प्राप्त गर्छ गर्नको लागि, लुगा धुने मेसिन केही साना बल, caking फिलर रोक्न हुनेछ जो राख्न आवश्यक छ।
उच्च गुणस्तरीय अस्तर सिर्जना
सधैं अर्को cloak किन्न विकल्प छैन। यस मामला मा, यो एक पुरानो ज्याकेट पुनर्जीवित गर्ने प्रयास लायक छ, उनको अझै पनि त्यहाँ सुरक्षित गर्न संभावना। किनभने गरिब गुणस्तर अस्तर को: को तल जैकेट तल चढती किन प्रश्न मा, वहाँ एक सरल जवाफ छ। पहिलो विकल्प: तपाईं स्टूडियो मा सहयोगको लागि अनुरोध गर्न सक्छ, र तिनीहरूले एउटा बाक्लो उच्च गुणस्तरीय कपडा मा तपाईंलाई यो सी लगाएका वा लुगा धुने पनि पछि लामो fluff छोड्न छैन।
दोस्रो विकल्प: तपाईं दर्जी को मद्दत बिना आफ्नै को अस्तर सी गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्षेत्रमा कम्तिमा केही अनुभव भएका व्यक्ति, सजिलै यो कार्य सामना गर्नेछ। तल जैकेट को fluff संभवतः कारण वास्तवमा गर्न, निरंतर चढती यदि फिलर कि ठीकसित छैन। यस मामला मा, fluff केही दिन देखा पर्न सक्छ र त्यसपछि रोक्न। लेबल इन्सुलेशन बारेमा सबै जानकारी प्रदान गरिनु पर्दछ।
अस्तर बनाउन निर्देशन
पहिलो र मुख्य तपाईं एक घर एक बाक्लो ऊतक पाउन वा भण्डारमा किन्न, यस्तो टीक रूपमा, जो देखि तकियों सी आवश्यक छ। उहाँले यो आधा जोडेको छ विशेष गरी भने, पंख गरौं गर्दैन। अझै पनि, तपाईं कैंची एक जोडी, एक पिन, एक सुई, मुद्दा र चक आवश्यक छ। तपाईं एक सिलाई मेशिन छ भने, तब ठूलो छ। को सिउनी साथ दुई पटक, बल लागि fluff गर्न अब चढ्नु हिंड्न - यदि, तपाईं हात मात्र सानो टाँका र अझ राम्रो बनाउन सी गर्न सक्नुहुन्छ। मुद्दा उत्पादन को मुख्य रंग संग एकै समयमा पर्नु, एक टिकाऊ र बलियो चयन गर्नुपर्छ।
यसबाहेक, thrust अस्तर बिस्तारै कुनै पनि प्याकेज मा, अर्डर घर भन्दा यो सबै गुमाउन छैन मा सङ्कलन fluff। तपाईं तयार छन् जो कपडा, एक कट सामाग्री संलग्न, र आफ्नो सर्कल को शुद्धता मा (तपाईं एक सानो आरक्षित मा, भत्ता मा छोड्न सक्नुहुन्छ), त्यसपछि बिस्तारै, बिस्तारै, सी। आधा सिलाई, समान रूप तल फैलाउन र अन्त सी अप। को अस्तर तयार छ, र आफ्नो ज्याकेट फेरि नयाँ, रूप पनि राम्रो।
दोस्रो Embodiment अस्तर सीना
यी कुराहरू मालिक धेरै निराशा, जब एक तल ज्याकेट चढाई fluff छन्। "के म के गर्नुपर्छ?" - यो तिनीहरूलाई bothers मुख्य प्रश्न हो। त्यहाँ अस्तर tailoring अर्को विकल्प छ। यसो गर्न, तपाईं एक पारदर्शी oilcloth puhonepronitsaemuyu कपडा लिन आवश्यक (एक उज्ज्वल चयन छैन किनभने यो आधार सामाग्री मार्फत देखाउन सक्छौं)। तपाईं दुई पक्ष को माप र दुई तल जैकेट लम्बाइ स्लिभ आवश्यक हुनेछ।
उत्पादन को लम्बाइ तल गर्न काँध को शीर्ष बिन्दुबाट मापन गर्नुपर्छ। फ्लैट माप हटाउन, तपाईं ज्याकेट र रूपरेखा विस्तार गर्न आवश्यक छ। को backrest, आस्तीन र हुड (आवश्यक भएमा) को सामने तल थिच्नुहोस् ढाँचा। अर्को, यो workpiece को कपडे लागू र2सेमी seams लागि कही एक आरक्षित थप्न हुनुपर्छ। यो प्रक्रिया गरेर, तपाईं अझै पनि ज्याकेट तल न्यानो गर्न थप मौका, यो धेरै न्यानो छैन वा fluff धेरै गुमाए भने छ।
अर्को तपाईं ज्याकेट बारी र सबै seams ध्यान कुरा वोल्ट नट आदि खोल्नु चोर्नु गर्न आवश्यक छ। सबै fluff सङ्कलन र समतल सतह मा उत्पादन फैलाउन, को seams मा एउटा नयाँ अस्तर सी गर्न सुरु गर्नुहोस्। केही अड्केको वा pricked छ भनेर बिस्तारै, एक भ्याकुम क्लिनर संग व्यवहार गर्छन्।
यो विवाह हो?
तल जैकेट को fluff चढ्नु भने - यो कम गुणस्तर उत्पादनहरु को पहिलो साइन छ रूपमा, एक विवाह हो। यो घटना कम लागत चिनियाँ जैकेट, को कुलीन ब्रांडेड उत्पादनहरु संग analogy गरेको छन् जो विशेष गरी साँचो हो। यस्तो कुरा अक्सर बजार र रिमोट आउटलेटहरू मा किन्न। फलस्वरूप, खरीददारों कि तल ज्याकेट चढाई fluff बाहिर फेला छन्। लिन के गर्न र के कार्य - कठिन समाधान गर्न। तर तपाईं पातलो र गरिब-गुणवत्ता अस्तर परिवर्तन गर्नु अघि, तुरुन्त आफ्नो खर्च गणना। आखिर, त्यहाँ स्टुडियो मा अस्तर को प्रतिस्थापन वा नयाँ उच्च-गुणस्तर, महंगा कपडा खरीद तर तल ज्याकेट भन्दा तपाईं अधिक महंगा खर्च हुनेछ भनेर हुन सक्छ।
मुकाबला र fluff को उन्मूलन को विधिहरू
बाहिर तल ज्याकेट को fluff चढाई भने, त्यसपछि तिमी सिर्फ यो निर्वात गर्न सक्नुहुन्छ, र भित्र भने, तपाईं अर्को धेरै प्रभावकारी विधि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ - पुरानो एउटा माथि हेम एक अतिरिक्त प्याड। आगरणको यस प्रकारको राम्रो गर्न मद्दत गर्न सक्छ, र तपाईं फिर्ता पंख छैन stabbing हुनेछ, र फिलर आफ्नो लुगा रहने छैन।
को fluff को तल जैकेट बाहिर आउँछ भने, समस्या को छुटकारा प्राप्त गर्न अन्य धेरै सरल र सजिलो तरिका हो। बस भ्याकुम क्लिनर टिप्न र भित्रबाट तिनीहरूलाई "हिंड्न"। धेरै यो प्रक्रिया के र यो धेरै प्रभावकारी छ कि दाबी गर्छन्। आवश्यक भएमा, यो एक निश्चित समय पछि पटक-पटक गर्न सकिन्छ वा fluff एक सानो आरोहण हुँदा बाहिर, प्रत्येक धुने पछि नपर।
निस्सन्देह, यो पनि एक महंगा बुटीक मा एक तल ज्याकेट किन्न, र यो नै हुनेछ हुन्छ। तर यस्तो स्टोर बारेमा यो को सम्भावना तिनीहरूले गुणस्तर, ब्रान्डहरु निगरानी रूपमा, बजार विरोध रूपमा, न्यून पारिएको छ, र यसैले कि आफ्नो प्रतिष्ठा मोल छ ख्याल। बुटीक को खरिदका लागि प्रदान बाहेक एक रसिद, र यस अवसरमा हुन, तपाईं पछाडि सार्न सक्षम हुनेछ। त्यसैले खुद्रा पसलहरुमा जैकेट तल किन्न सर्वश्रेष्ठ छ, त्यसैले तपाईं overpay छैन। तपाईं विक्रेता पैसा दिन अघि, तपाईं ध्यानपूर्वक निरीक्षण र उत्पादन परीक्षण कुनै गांठ छ भने आवश्यक छ। कि पछि तपाईं ज्याकेट मा प्रयास गर्न यो रोल र कि त्यहाँ एक स्वेटर fluff कुनै पनि छन् हेर्न जाँच गर्न आवश्यक छ।
जब कुराहरू छनौट सधैं निर्माता नाम हेर्न: यो जाडो लुगा विशेषज्ञ गर्नुपर्छ। तिनीहरूले पंख tailoring को intricacies थाहा र ठूलो अनुभव छ। तिनीहरूले पनि आफ्नो उत्पादन मा एक ग्यारेन्टी प्रदान गर्नुपर्छ - यो तिनीहरूले गुणस्तर को आश्वासन दिए भन्ने हो।
म वस्तु फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ?
को तल जैकेट तल चढती, र तपाईँले उपभोक्ता अधिकार मा व्यवस्था अनुसार, किनेको छ भने, तपाईं वस्तु फिर्ता पसलमा फिर्ता र आफ्नो पैसा टिप्न अप गर्ने अधिकार छ। तपाईं छैन भने, जो कारण लागि, त्यसपछि, सम्भवत, उत्पादन तपाईं लामो समय को लागि सेवा गर्नेछन्। त्यस अवस्थामा, तपाईं अर्को ज्याकेट किन्न निर्णय गर्छन् गर्दा, तपाईं उपयोगी यो कसरी चयन थाहा हुनेछ।
जब तल जैकेट छनौट लागि के हेर्न?
तपाईं उच्च-गुणवत्ता र प्राकृतिक तल ज्याकेट खोजिरहेको भने, यो एक खेल दोकान मा टिप्न सबै भन्दा राम्रो छ। तिनीहरूले यस्तो रूपमा कुराहरू को एक ठूलो दायरा प्रस्तुत अशुद्ध फर, राम्रो इन्सुलेशन, ठ्याक्कै चढ्नु छैन जो संग, र प्राकृतिक। पैदल यात्रा लागि स्की उपकरण र वस्त्र उत्पादन कि ब्रान्डहरु मा एक नजर लिनुहोस्। तर सम्झना, fluff - यो एक सनकी सामाग्री, यसको सबै लाभ बावजुद छ। त्यसैले, तपाईं एक ज्याकेट वा व्यावहारिक किन्न चाहनुहुन्छ भने, यस्तो कोट रूपमा, त्यसपछि तपाईं ध्यान सिंथेटिक इन्सुलेशन गर्न, उदाहरण holofayber मा भुक्तानी गर्नुपर्छ।
Bridesmaids पोशाक: छनौट लागि आधारभूत नियमहरू
अवलोकन, मोडेल मिश्रण र समीक्षा: ट्रेक्टर तलवों संग फेसनदार जूता
मोती जौ संग अचार सूप
लेखक अनातोली Aleksin: जीवनी, फोटो
व्लादिस्लाव Zavyalov। जीवनी व्यक्तिगत जीवन। "रूस को बिहान" को स्थानान्तरण
हामीलाई भन्नुहोस् के मुसा सपना